Atosɛm a Ama Onyankopɔn Ayɛ Onnidin​​—Nea Enti a Onyankopɔn Din Ho Hia
Atosɛm a Ama Onyankopɔn Ayɛ Onnidin
NEA NNIPA PII GYE DI
“Sɛ́ Onyankopɔn wɔ din anaa onni din no, yɛn adwene mpo nhyia wɔ ho na kampɛsɛ yɛahu saa din no.”—Ɔbenfo David Cunningham, Theological Studies.
NOKWASƐM A ƐWƆ BIBLE MU
Onyankopɔn kae sɛ: “Mene Yehowa; me din ne no.” (Yesaia 42:8) Edin Yehowa no yɛ Hebri kasa, na ɛkyerɛ “Nea Ɔma Ɛyɛ Hɔ.”—Genesis 2:4.
Yehowa pɛ sɛ yɛde ne din frɛ no. Bible ka sɛ: “Mommɔ ne din. Momma aman nhu ne nneyɛe, na mompae mu nka sɛ ne din korɔn.”—Yesaia 12:4.
Yesu bɔɔ Onyankopɔn din, na ɔkaa n’asuafo no ho asɛm kyerɛɛ Yehowa wɔ mpaebɔ sɛ: “Mama wɔahu wo din na mɛma wɔahu.” Adɛn nti na Yesu maa n’asuafo no huu Onyankopɔn din? Ɔkyerɛɛ mu sɛ ɔyɛɛ saa na ‘ɔdɔ a Onyankopɔn de dɔɔ no no atena wɔn mu na ɔno nso atena wɔn mu.’—Yohane 17:26.
Nyamekyerɛfo Walter Lowrie kae sɛ: “Sɛ obi nnim Onyankopɔn din a, ɔrentumi mfa no adamfo, na sɛ ɔfa no sɛ ɔyɛ tumi bi kɛkɛ nso a, ɛnde ɔrentumi nnɔ no.”
Ná Victor kɔ asɔre nnawɔtwe biara, nanso na ɔnhyɛ da nnim Onyankopɔn. Nea ɔkae ne sɛ: “Mibehui sɛ Onyankopɔn din de Yehowa, na ɛyɛɛ sɛ nea afei na mahu no foforo. Ná ɔte sɛ obi a mate ne ho asɛm araa na afei de mede m’aniwa ahu no. Afei mihui sɛ ɔyɛ obi a metumi afa no adamfo.”
Wɔn a wɔde Yehowa din frɛ no no, ɔno nso bɛbɛn wɔn. Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ wɔn a ‘wodwen ne din ho no, ne yam bɛhyehye no ama wɔn, sɛnea obi yam hyehye no ma ne ba a ɔsom no no.’ (Malaki 3:16, 17) Bio nso, wɔn a wɔbɔ Onyankopɔn din frɛ no no, Onyankopɔn bɛma wɔn akatua. Bible se: “Obiara a ɔbɛbɔ Yehowa din afrɛ no no, wobegye no nkwa.”—Romafo 10:13.